Posted by Tranquillus | Agoosto 8, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Cilmi-xirfadeed waa jimicsi doorasho iyo soo-celin fikrado guud oo fudud oo fudud si loo fududeeyo go'aan qaadashada iyo ficilka. ah qorista koobi xirfadeed ma ahan mid yar, gaar ahaan tan ruuxa qalinka ma aha wax caadi ah dabiiciga ah. Dhaqdhaqaaqa suubanaanta xirfadlaha ah waa mid aad u adag marka loo eego qorshaha horay loo qorsheeyey, abuuro sanduuqyo u habaynaya fikradaha kala duwan. Haddii ay tahay qoraalka qaadashada ama warbixinta, shuruudo dhowr ah ayaa qeexaya qorista koobi xirfadeed guul. Si aad u ogaato sida loo qoro warbixin koobanWaa kuwan talooyin iyo talooyin.
Waa maxay xirfad-xirfadeedka xirfadeed ee aanu ahayn
Calaamadaha xirfadlayaasha ah maaha gabogabo ardayda. Xitaa haddii ay waydiisato qoraallo leh qorshe leh laba ama saddex qaybood oo ku saabsan mawduuc gaar ah, ma aha su'aal halkan ku saabsan bixinta falanqeyn shakhsiyeed. Si kale hadii loo dhigo, dhejinta lagama tagin si aad uxiiso.
Waa daraasad faylka ama dukumeentiga lafteeda, sidaas darteed ma jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan daaweynta ama aan la macaamilaynin tan ama qayb ka mid ah faylkan. Dambe waa in loola dhaqmaa si buuxda oo macluumaadka waa in aan shakhsiyan ku qanacsaneyn qoraaga dukumeentiga. Macluumaad dheeraad ah waa in aan lagu darin feylka si loo farsameeyo loona xakameeyo.
Soo koobista xirfadlaha ayaa xitaa ka yar qoraalka maamulka. Haddii qoraallada labaduba ay soo bandhigaan tilmaam caadi ah ee sifooyinka ay leeyihiin, aqoonta xirfad-yaqaannimada waxaa lagu kala soocayaa ujeeddadeeda qeexan. Dhaqankiisa guud, shaqaaluhu waa inuu mawduuca u dhigaa guud ahaan guud ahaan marka loo eego qaabka loo yaqaan "synthesis".
Waa maxay soo koobid xirfadeed maxaase loo qoraa mid?
a qalinjabin xirfadeed waa soo koobid habaysan oo qaabaysan oo ku salaysan hab cad oo firfircoon ujeedada gaarka ah. Waxay fududeyneysaa dukumeentiga sida maqaal, xeer, heer, fayl dhamaystiran, buug.
Waa qaybo ka mid ah qodobo ka kooban qaabdhismo isku dhafan oo nidaamsan oo fikradaha la xidhiidha iyadoo la raacayo sabab wanaagsan. Farsameynta xirfadlaha ah ayaa ka duwan midka aad u sarreeya, waa dhexdhexaad iyo ujeedo iyada oo aan calaamad u aheyn, midnimada, ama xukunka shakhsi ahaaneed ee fikradaha uu horumarayo. Sidoo kale waa daacad u ah fikradaha qoraaga iyaga oo aan isku dayin in ay kala qaybiyaan ama u qaybiyaan.
Waa muhiim inaad qori koobi xirfadeed si awood ugu yeesho qofka qaataha ah in uu go'aan ka gaaro islamarkaana talaabo wax ku ool ah u qaado. Qadarka macluumaadka la heli karo waa mid aad u ballaaran oo meelo badan oo dabooli kara had iyo jeer ha u ogolaan waqtiga ama xirfadaha si ay u falanqeeyaan. Sidaa darteed baahida loo qabo in la qoro oo loo qaybiyo qoraal kooban.
Ujeeddada loo yaqaan "synthesis professional"
Ka hor intaanad bilaabin qorista iyo ururinta macluumaadka, marka hore waxaad u baahan tahay inaad qeexdo ujeedka ujeedada mihnadeed. U dejinta himilada qalinjebinta waxay caawineysaa in la caddeeyo waxa iyo cidda u adeegi doonta. Si ka duwan jilitaanka tartamada, qori koobi xirfadeed waxaa lagu qabtaa nooc caddaalad ah oo lacag la'aan ah iyada oo dareen gaar ah u ah baahida ganacsiga.
Sidaa daraadeed waa in aan aqoonsannaa cidda wax qoreysa qalinjabinta. Cilmi-baarista iyo erey-bixinta la isticmaalo waxay ku habboonaan doontaa iyadoo la eegayo dhagaystayaasheeda. Sidaa darteed, haddii dukumiintiga loogu talagalay farsamo-yaqaan kombuyuutar, waxay noqon doontaa caadi in la isticmaalo ereyo farsamo, si kastaba ha ahaatee, ereyada noocaas ah waa laga ilaalin doonaa haddii dukumintiga lagu wajahayo qareen, ama xisaabiye.
Marxaladdan, sidoo kale waa muhiim in la ogaado heerka aqoonta mawduuca uu ka dhexeeyo. Haddii midkani yahay neophyte, dhajinta ayaa yeelan doonta aragti caalami ah oo mawduucaas ah, waxaana lagama maarmaan ah in diiradda la saaro dhinacyada xiisaha badan haddii qofka wada-hadlka ahi yahay qof aan-dhexdhexaad ah.
Ogaanshaha ujeedada ujeedada qoraalka ayaa ah mid muhiim ah. Talaabadani waxay suurtogal u tahay in la ogaado haddii qalabku uu u adeegi doono inuu abuuro ra'yi ku saabsan mowduuc, si uu u sameeyo go'aan, inuu raadiyo xalka dhibaatada, si loo xoojiyo warbixinta, si loo xaqiijiyo macluumaadka, iwm. Mawduuca mawduuca wuxuu ku xirnaan doonaa ujeedada la dabagalay, sida raadinta macluumaadka.
Raadinta iyo kala hormarinta macluumaadka
Ururinta xogta lagama maarmaanka u ah qorista waxaa lagu qabtaa akhriska. Marka ay timaado qoraalka qoraalka, ururinta macluumaadka waxay ku socotaa raadinta dhismaha qoraalka (titles, subtitles, ujeedada qoraaga, iwm) iyo ururinta macluumaadka muhiimka ah. Ujeedada ururinta macluumaadka waa in la ogaado halka ay xogtu tahay iyo sida loo abaabulo.
Laguma soo koobi karo fahamka ama falanqaynta waxyaabaha ku jira. Inta lagu jiro marxaladan, waxaa lagama maarmaan u ah in la xakameeyo dhammaan wixii ku habboon in la haysto kaliya muhiimadda. Marka la eego shuruudaha la taaban karo, raadinta macluumaadka ayaa imaanaya ka dib markii ay qeexeen bartilmaameedkooda iyo baahidooda. Waxay ka kooban tahay dhowr qaybood oo aynu ku qasbanahay inaan ka jawaabno su'aalaha, goorma, sidee, sidee, intee in le'eg (sababta loo qeexayo), waxa (qeexaya ujeedooyinka). Dhinacyadu waxay helayaan jilicsan marka cilmi-baaristu socoto.
Waa arrin muhiim ah halkan in aan la isticmaalin jumlado dheer, laakiin si taxadar leh u doortaan ereyada muhiimka ah si ay u fududeeyaan qaabka fikradda. Dhamaadka raadinta macluumaadka, waa muhiim inaad ka fekertid sida loo kala hormariyo qayb kasta, adigoo fiiro gaar ah u leh ereyada muhiimka ah. Ururinta iyo mudnaan-siinta macluumaadka waa tallaabo muhiim ah oo lagu caawinayo dhisidda qorshe cad oo sax ah.
READ Waa maxay edeb caynkee ah si aad ugu dirto mahadnaqa email xirfadle ah?
Dhisidda qorshe xirfad-yaqaanimo
Si loo dhiso qorshaha a qalinjabin xirfadeedwaa in aan muujinnaa qaybaha ugu muhiimsan ee ka mid ah, kuwa u qalma dareen gaar ah. Qorshaha waxaa loo dhisay si xor ah iyada oo loo eegayo inuu yahay mawduuc dabiici ah (oo leh aragti guud oo mawduuca ah), soo-bandhigid natiijo-cawaaqib ama soo-jeedin ah soo jeedin.
Dhammaan fikradaha la soo ururiyey waa in lagu daro qorshaha adigoo ku dhejinaya fikradaha ugu muhiimsan ee tusmada. Qorshaha waa in uu la socdaa mawduuca dhajinta iyo waa inuu ixtiraamaa dheelitirnaan. Qaybaha iyo qaybaha hoose waa inay lahaadaan cabbir aad u tiro badan isla markaana waxay ku dhow yihiin dulsaar u dhigma.
Dhisidda qorshaha waa in aysan noqon mid adag, laakiin waa cad, si macquul ah oo si fudud loo fahmi karo. Qeybta koowaad waa loo qoondeeyn karaa falanqaynta sababaha iyo macluumaadka ku haboon ee dhibaatada. Qaybta labaad, waxaan soo bandhigi karnaa cawaaqibka la xidhiidha dhibaatadan, waxay soo jeedineysaa xalalka suurtogalka ah iyo shuruudaha fulinta.
Ku qor koob kooban xirfadeed inta badan waxaa lagu sameeyaa laba ama saddex qaybood, laakiin waxay ku talineysaa in ay ku kooban tahay laba qaybood. Qorshaha waa in si cad loogu soo bandhigo dukumiintiga si dhammaan qaybaha si fudud loo aqoonsado. Waxaa lagula talinayaa in lagu soo koobo qaybo kala duwan (I iyo II) iyo subparts (A iyo B ama 1 iyo 2). Qayb kasta iyo qayb-hoosaad kasta waa in ay horey u qaadaan cinwaan. Marka lagu daro labada qaybood ee horumarinta, wax soo saarka xirfad-xirfadeed ayaa sidoo kale leh hordhac iyo gabagabo.
Horumarka wuxuu caadi ahaan ku kala duwan yahay mawduuca, laakiin hordhaca iyo gabagabada had iyo jeer waxay leeyihiin door isku mid ah. Sidaa darteed, hordhacu wuxuu u wargalin doonaa qofka qaataha ah ujeedada udub-dhexaadka, sababaha dhiirigeliya, muhiimada iyo danta ugu dambeeya. Hordhacu waa inuu noqdaa mid sax ah, gaaban oo dhameystiran. Xeelado dhowr ah ayaa ku filan in la yiraahdo waxa ku jira qoraalka.
Xaaladaha qaarkood, for qori koobi xirfadeedHordhacku muhiim maaha waana la iska indhatiri karaa maadaama ay u muuqato waxyaabo muuqda. Laakiin waa faa'iido weyn gaar ahaan si loo hubiyo in qofka qaataha ah uu fahmo adiga. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad dib u soo xasuusato macnaha guud, haddii qalabku leeyahay in la akhriyo dhowr jeer.
Marka la eego gabagabada, waa inay sameeyaan wax ka badan soo koobidda dukumiintiga, waa jawaab u ah mushkilada kor loogu soo qaaday kobcinta. Waxay si ballaaran dib u soo celinaysaa talooyinka si ay u soo gudbiyaan xalalka ay soo saareen qoraaga aynaan haysanin kaalin ay ku keenaan waxyaabo cusub oo ku saabsan horumarinta qorshaha.
Qorista mawduuca xirfadeed
Marka qorshaha la dhiso, waa in aan sii wadno qorista koobi xirfadeed. Xeerarka guud ee qorista dukumiintiga waxay sidoo kale khuseeyaan qorista kooban. Jumladuhu waa inay gaaban yihiin cutubyo wanaagsan oo qaabaysan iyo erey la fahmi karo. Qaabka iyo qoraalka qoraalka kooban waa inuu ahaadaa mid la mid ah codadka ereyga qoraalka ah, noqoshada dareeraha, miyir-qabka ah iyo qarsoodi haddii ay macquul tahay.
Haddii shayada qaarkood u baahan yihiin sharaxaad dheeri ah, waxaa laga yaabaa inay ku habboon tahay in ay ku noqoto mid ku xigta si ay u samayso akhrinta dukumiintada. Haddii ay dhacdo in dhejintu ay dheeraato oo ka badato ka badan bogagga 3, ha ka waaban inaad gashid soo koobitaan. Miisaska iyo garaafyada waxay noqon karaan kuwo wax ku ool ah oo raacaya oo muujinaya qoraallada. Magacyada kooxaha iyo qeybaha hoose waa in ay hadlaan. Waa inaan iska ilaalinno koobab darajo ah oo aad u liita (taariikhda, macnaha guud). Cinwaanadu waa inay lahaadaan awood xoogan waxayna bixiyaan macluumaad ku saabsan waxyaabaha ku jira qaybta cutubka.
Marka la eego cutubyada, waa wax aan fiicnayn in ay noqoto mid aad u daacad ah oo doonaya in la dhiso jumlado qurux badan, waxaa haboon in la doodo caddaynta erayada gaaban gaaban. Qaab-dhismeedka, waxay noqon kartaa mid waxtarka leh si loo qeybiyo bogga taxane adoo xusaya qorshaha faahfaahsan, macluumaadka la isku keeno iyo tirooyinka muhiimka ah, sawirrada, sawirrada si aad u muujiso ereyada.
Xeerarka kale ee habka loo xushmeeyo
Markaad wax qoraysid, waxaa lagugula talinayaa inaad si guud u sheegto oo aan la xusin dhammaan faahfaahinta aan waxtar lahayn. Guudmarka soo koobiddu waxay ka saareysaa faahfaahintaan aan muhiimka ahayn iyadoo weli la soo bandhigayo macluumaad muhiim ah. Intaas waxaa sii dheer, waa in taxaddar laga muujiyaa in laga saaro calaamadaha hadalka, hadalka hadalka, ku celcelinta, laba-laabashada, iwm.
Erayada qaarkood ee ku hoos jira hadal afka ah meelna kuma laha qoraal ahaan, gaar ahaan haddii aysan lahayn macno sax ah. Ereyada sida "sida loo dhaho", "taasi waa" bilowga tuducyada waa la tirtiri karaa iyada oo aan saameyn ku yeelan macnaha weedha. Tusaalooyinka, waxaa lagama maarmaan ah in la xaddido isticmaalka kan dambe iyo in la haysto oo kaliya tan ugu xiisaha badan.
Soo-jeedinta sababaha iyo tibaaxaha kuwa ku hadla ayaa sidoo kale lagu talinayaa. Haddii ereyadani yihiin luqad farsamo oo ay isticmaalaan afhayeenka, waxay noqon karaan kuwo waxtar u leh fahamka. Waxaa muhiim ah in aad dib u dhigto qoraalkaaga oo ah horumarka qoraalka iyo dib u akhrinta.
Dhamaadka dhammaadka qorista koobi xirfadeedWaa inaad dib u akhridaa oo aad fiirisid cutubka koowaad ee dukumeentigaaga, kaas oo inta badan si taxadar leh u akhriya akhristayaasha kala duwan ee shirkadda.
Sidee loo qoraa warbixin xirfadeed? July 25th, 2021Tranquillus
horeSidee loo qoraa warbixinta khuseeya?
socdaQalabyada ugu fiican ee internetka loogu talagalay turjumista qoraalka ama bogga
Qor emayl haddii aad maqantahay